Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0113 tal
Lesona 01 : Fijangajangana ara-panahy (Hosea)
30 Mar - 05 Apr. 2013
Teny fikasana mampanantena famerenana amin'ny laoniny indray
Talata 02 Apr.
Vakio ny Hôseà 2. Inona no hafatra fototra avy amin’Andriamanitra ho an’ny vahoakany eto? Ahoana ny fomba isehoan’ny filazantsara eto amin’ity toko ity?
Maneho fahamarinana lalina momba ny fitiavan’ Andriamanitra tsy miova vahoaka iray izay tsy mendrika izany akory ny hafatra entin’i Hôseà. Mirakitra lahateny lava be ataon’Andriamanitra momba ny fihemoran’ny Isiraely ny Hôseà 2, izay ampifanoheriny amin’ny fitiavany tsy miova ny vahoakany avy eo. Aorian’ny famaizan’ilay lehilahy ny vadiny mpijangajanga dia hoentin’ilay lehilahy any an’efitra ilay vadiny, dia hivady indray izy ireo any.
Araka izany, dia fanoritsoritana ny fotoana hoavy ao ambadiky ny fitsarana, rehefa hotaomin’Andriamanitra ho tia Azy indray tahaka ny teo aloha ny Isiraely (Hos. 2:14–17) no mamarana ity toko ity. Tsy hohanin’ny bibidia sy ny biby any an-tsaha intsony ny voaloboka sy ny aviavin-dravehivavy, satria ireny rehetra ireny dia ho tonga mpandray anjara amin’ilay fanekena vaovao (Hos. 2:20). Ambonin’izany, omena anarana vaovao avokoa ny ankizy rehetra, ho fanehoana indray fa vonona Andriamanitra hanasitrana sy hamela ny fahotan’ny vahoakany tamin’ny lasa.
Omen’Andriamanitra maimaim-poana ho antsika ny famelan-keloka. Ohatrinona ny sandan’izany famelan-keloka izany ho an’Andriamanitra? Inona kosa no sandan’io lesona io ho an’i Hôseà? Hôs. 3:1,2.
Natao hanana tombontsoa i Hôseà amin’ny maha-lehilahy isiraelita nitombo teo anivon’ny fiaraha-monina tapahin’ny lehilahy (‘société patriarcale’) azy. Narahina adidy mavesatra anefa izany tombontsoa izany. Ny lehilahy teo amin’ny Isiraely fahiny dia nanao ezaka goavana mba hamela heloka sy hampody indray ny vadiny tsy nahatoky, mba tsy hilazana ny hoe hanaiky ho zanany ireo zaza nateraky ny vadiny tamin’ny lehilahy hafa. Izy mijoro eo anilan’ny vadiny sy ny zana-badiny, miaritra, araka izany, ny fandavan’ny fiaraha-monina, dia azo lazaina fa anankiray amin’ireo fanandramana tena sarotra indrindra eo amin’ny fiainana.
Na teo aza anefa izany, dia “nividy” ny vadiny indray i Hôseà. Amin’ny lafiny iray dia nanao tahaka izany ihany koa Andriamanitra tamin’ny taranak’olombelona, fa ny sandany dia ny fahafatesan’i Jesôsy teo amin’ny hazo fijaliana. Ny fibanjinantsika ny hazo fijaliana ihany àry izany no hahazoantsika sary mazava kokoa ny sandan’ny nividianan’Andriamanitra antsika indray avy tamin’ny faharavana vokatry ny fahotana.